MRICC - Xuzhou Fonnov Architectural Material Co., Ltd.
Nahoana no i FONNOV
Ny hazo 2018 Aluminium hazo fanaka hazo dia nanantona ny valindrin'ny boaty
Fikambanana iray miavaka amin'ny tsenam-barotra izahay, mazoto manolo-tena hanolotra ny hazo 2018 Aluminum hazo amboaram-bozaka efa natsangana. Ny fonosana hazo ambim-baventy 2018 Aluminum izay natsangana ho an'ny hazo amboarina dia natao manokana amin'ny fampiasana fitaovana avo lenta sy fitaovana maoderina amin'ny famandrihana miaraka amin'ireo fenitra ara-tsakafo. Ny fanolorana hazo 2018 Aluminium hazo fikandrana fanakona ny boaty dia ...
2018 Decorative Aluminium natsangana napetraka tao amin'ny plastika lavarangana
Noho ny fananana fahaiza-manankarena manan-karena, azonay natao ny mametraka, manolotra ary mivarotra ny alim-pandehanana 2018 Decorative ao amin'ny plastika. Noforonin'ny manam-pahaizana manokana momba ny sehatra, izay manana fahalalana be dia be momba io sehatra io. Talohan'ny fandefasana farany, ny ambioka 2018 Decorative izay natolotrareo dia napetraka tamina plastika lavarangana no nokendren'ny ekipa iray ...
alim-panoloana efitrano fanokafana alimo
Manolotra valan-jiro misy alim-bary misy alim-bary an-damosina tahaka ny valindrihana alimo sy ny valin-drakitra izay amboarina araka ny fenitra indostrialy. Tena mora ampiasaina amin'ny programa indostrialy samihafa, ny alam-baravaran'ny varavarankelin'ny varavarankely malalaka dia mora alahatra. Ny mpanjifa dia afaka mampiasa ny andian-tsavinay samihafa amin'ny loko sy loko samihafa mifototra amin'ny filaharany sy ny fangatahana manokana. Like clip ...
Tontolon'ny metaly/Sokao misokatra ho an'ny sela
2018 Modely fanitso metaly alemana
Mba hikolokoloana hatrany ny fangatahan'ireo mpanjifany tsy misy fiafarany, ny orinasa dia manome sehatra tsara indrindra an'ny alam-barotra 2018 Fashionable ala ho an'ny mpanjifa miavaka. Ity fantsona metaly 2018 Modely ity dia mandefa any amin'ny hopitaly, trano fisakafoanana, trano birao, birao, fivarotana ary hotely. Manolotra an'ity vokatra ity amin'ny mpanjifanay izahay, amin'ny vidiny be indrindra. Sokajy: Ceiling ...
Ny alim-bary misy alim-bary izay atolotra dia ahitana ny fanangonam-peo mahavariana izay vita amin'ny endriny vita amin'ny metaly ambony ary koa ny endrika mahavariana sy mahafinaritra izay mahatonga azy ireo ho tena tian'ny olona sy mitaky amin'ny tsena. Ankoatr'izay, ny fanangonana alim-bary natolotry ny alim-borona dia azo omena antsika koa amin'ny safidy noforonina manomboka amin'ny fivoaran'ny toe-karena. Azontsika atao koa ny mahazatra ...
Hook On Metal Ceiling/Tontolon'ny metaly
Big Discount lohataona lohataona clips
Noho ny matihanina malaza dia afaka manolotra klioban'ny lohataon-tsokajy lehibe ho an'ny birao, tranombarotra sns. Ireo clips amin'ny lohataona lehibe dia misy karazana loko sy karazana. Ireo tsenam-bolo lehibe loharano lehibe dia atsinanana mba hametrahana sy hikojakojana azy ary rakotra fiarovan-tena miaro izay maharitra maharitra. Ireo lohandoham-bolam-bolam-bidy lehibe indrindra ...
Cliquez dans ceiling et metal/Tontolon'ny metaly
Alaivo ny alim-borona amin'ny alàlan'ny 129
Mba hikolokoloana hatrany ny fangatahan'ireo mpanjifa tsy misy fiafarany, ny orinasanay dia manome ny kalitao tsara indrindra amin'ny Hook amin'ny alimo 129 perforated ho an'ireo mpanjifa voatsiratsira. Ity Hook on aluminium perforated ity dia mandefa any amin'ny hopitaly, trano fisakafoanana, trano birao, toeram-pivarotana, trano fandraisam-bahiny ary trano fandraisam-bahiny. Manolotra an'ity vokatra ity amin'ny mpanjifanay izahay, amin'ny vidiny be indrindra. Sokajy: Ceiling ...
Aluminium 2017 perforated amin'ny horonantsary amin'ny lavaka misy loko Faux
Isan'ny iray amin'ireo fikambanana malaza, isika dia mandray anjara amin'ny fanolorana alika 2017 Aluminum isan-kerim-bolom-piraofilina am-polony miaraka amin'ny Faux hazo ColorQ. Ireo alemana 2017 Aluminium alim-borona vita amin'ny alàlan'ny varavarana misy ny loko Faux dia ekena noho ny fanorenana mafy orina, ny fisainana marina sy ny fahombiazan'ny asa. Noho ny tanjaka tsara indrindra sy ny androm-piainan'ny fiainana, ireo 2017 ireo ...
2017 Fitaovana fanakamboarana maoderina ho an'i Kanada
Tanjonay ny mametraka ny filan'ny mpanjifan'antoka amin'ny fitaterana azy ireo amin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo vahaolana azo antoka sy tsara indrindra ho an'ny seha-pamokarana XnUMX Modely amin'ny alàlan'ny modely ho an'i Kanada. Ny tena mahavariana mba hanomezana fahafaham-po ny fepetra takian'ny mpanjifantsika, ny vahaolana ho an'ny endri-panoloram-panarenana 2017 Fashionable ho an'i Kanada dia tena ankasitrahana eo amin'ny tsena. Manolotra an'ity serivisy ity amin'ny vidiny lafo isika eny an-tsena.
2017 Aluminium fanakambana tsangambato
Manolotra kisarisary miavaka amin'ny alim-borona miendrika 2017 Aluminium izahay, izay vita amin'ny fampiasana tsara indrindra GI sy Aluminium. Mba hahazoana antoka ny kalitaony, ny mpandinika ny kalitao dia mandinika ity rafitra ity amin'ny alàlan'ny paikady samihafa. Ankoatr'izany dia manome rafitra samihafa sy rafitra ity rafitra ity mba hahazoana ny filàna samihafa amin'ny ...
2017 Aluminium metaly rafitra fanamafisam-peo
Ny fikambanantsika dia mirotsaka amin'ny famokarana sy famokarana ambaratonga tsara indrindra an'ny rafitra fantsom-bokatra 2017 Aluminum metaly. Ny rafitra fantsona metaly 2017 Aluminum dia rafitra tena mahomby sy tena maharitra izay manome fanohanana lehibe ho an'ny fanodinana herinaratra isan-karazany, ary koa ho mora amin'ny fikolokoloana mora sy ny fikasana mahafinaritra amin'ny maso. Ny rafitra fantsom-bokatra 2017 Aluminium metaly dia ...
Ny varotra 2017 China dia manome toky ny valin-drihan'ny alimo
Manome toky ny mpandraharaha manerantany ny varotra 2017 China isika izay manamboatra ny alim-borona misy alimo izay vita avy amin'ny metaly metaly tena izy, izay mora alahatra. Ireo fanomezan-dàlana 2017 China ireo dia manome toky fa misy lavaka fantsom-boaloboka misy alim-borona dia misy amin'ny isam-bolana sy ny lamina araka ny safidin'ny mpanjifantsika. Ny fanamafisana ny varotra 2017 China dia ny fanamafisana ny valindrihana misy alim-boanjobe any amin'ny trano fandraisam-bahiny, toy izany ...
Toeram-pivarotana vita amin'ny alam-barotra vita amin'ny alim-pito mavo
Izahay dia singa miavaka amin'ny tsenam-barotra, mavitrika amin'ny fanolorana ny alim-bary fantsom-bokatra tsara indrindra amin'ny alàlan'ny alim-bary mivadika. Ny fonosana lavalava vita amin'ny alam-barotra vita amin'ny alam-barotra vita amin'ny alamia dia natao manokana amin'ny fampiasana fitaovam-peo avo indrindra sy fitaovana maoderina arakaraka ny fari-piantsenan'ny tsena. Nanolotra fanamafisam-peo maivana aluminium foam fanaterana tafo ...
2017 Quality Assured Aluminum Acoustic Plafond Ceiling Board
Ny 2017 Quality Assured Aluminium Acoustic Plafonda plastika fanolorana dia ahitana fanangonana tena tsara izay vita amin'ny endriky ny metaly ambony ambony sy ny drafitra mampientanentana sy mahavariana izay mahatonga azy ireo ho tena tiana indrindra ary angatahana amin'ny tsena. Ankoatr'izay, ny fanolorana karazana valopy fananganana fonosana aluminium 2017 azo antoka dia azo omena antsika amin'ny famokarana manontolo ...
2017 lavalava vita amin'ny metaly matevina mihantona ny endriky ny Christmas
Ny fikambanantsika dia mirotsaka amin'ny famokarana sy famokarana amboara tsara indrindra an'ny 2017 amin'ny kitapom-bolan'ny metaly manganohano mihantona. Ireo fantsona metaly mivelatra 2017 izay mandrehitra ny endriky ny endriky ny endriky ny trano dia rafitra tena mahomby sy tena maharitra izay manome fanohanana lehibe ho an'ny fampitaovana elektrônika samihafa, ary koa ho mora amin'ny fikolokoloana mora sy ny fikolokoloana tsara. Ny fanontana metaly 2017 mivelatra izay mihantona ...
4mm Mirror mamaritra Acp ho an'ny Design Aluminium Panel
Ny orinasanay dia mihevi-tena amin'ny fanomezana ny 4mm Mirror Finish Acp ho an'ny Align Panel Align Panel ho an'ny mpanjifa. Manolotra sehatra iray, trano ary trano samihafa ity serivisy ity mba hanamboarana sy hamokarana plastika sandoka amin'ny fampiasana gypsum avo lenta. Ankoatra izany, ity 4mm Mirror Finish Acp ho an'ny Design Shape Mirror Aluminium Panel Work dia novonoina teo ambany vodilaharana ...
2018 Aluminium acoustique fanakanana ny valindrihana
Miaraka amin'ny fanohanan'ny manampahefana mpikarakara anay dia manome ny mpanjifanay amin'ny kalitaon'ny fiarovana ny alam-barotra 2018 Aluminium izay efa natsangana ho an'ny trano fisakafoanana izay mety ho an'ny trano fandraisam-bahiny sy ny trano fonenana ary manam-pahalalana marina ho an'ny fametrahana mora. Ireo valan-tsoratry ny alim-borona 2018 Aluminium ireo dia azo avy amin'ny mpivarotra azo itokisana 'amin'ity tsena ity noho ny fiheveran'ny mpiasan'ny fitantanana. Ankoatra ny...
Firafitrana vaovao Metal Wood varimbazaha fantsom-bokatra
Mihantona avy eny amin'ny tokotany lehibe ny alam-baravarana. Ny metal, na ny vy tsy misy rongony, dia miasa tsara amin'ny rindrina mihantona. Ny ankapobeny dia tonga amin'ny fotsy fotsy. Fitaovam-baovao vaovao Metal Wood varimbazaha misy sela mivelatra no manolotra vokatra avo lenta amin'ny alàlan'ny endriny malalaka amin'ny drafitra hafa sy ny safidy manambatra ny Tiles, (Mandrosoa ary Miantsona), na ...
Fonon'ny sela metaly, alim-barotra am-bava ho an'ny garaway station
Manana fitaovana izahay amin'ny fametrahana ny mari-pamantarana an-tariby misy alika metaly, alim-barotra aluminium ho an'ny gara railway. Ny vokatra azonay dia natao taorian'ny fikarohana sy fivoarana goavana mba hanomezana fahafaham-po ireo fepetra takian'ny mpanjifa sarobidy. Ny fonosana sela misy ny alika, ny alam-barotra aluminium an'ny Railway station dia novokarina tamin'ny fampiasana fitaovam-panandramana tsara indrindra, noho ny tsy fahampian'ny manam-pahaizana. The Offer Metal ...
Pvdf mitentina alimo metaly alimo ho an'ny rindrin'akora
Nampian'ny manam-pahaizana matihanina manana traikefa be dia be izahay, afaka nanamboatra sy namatsy ny pneumatika tamin'ny alàlan'ny Pvdf ho an'ny rindrina fanitso. Ny solotenan'ny Pvdf vita amin'ny alim-bary aluminium amin'ny alàlan'ny rindrina fanorenana dia mitaky be dia be any amin'ny seranam-piaramanidina, hopitaly, hotely, lobby, metro station, zana-bahoaka. .
FONNOV, a subsidiary of CAIJING. A dynamic company based in China with business activities related to architectural and industrial materials industry. CAIJING is a shareholder of 3 main businesses on manufacturing fantsona metaly & fanamoriana, alim-borona, ary koa pofomam-paty. FONNOV, amin'ny maha-mpanampy azy, dia miasa amin'ny varotra sy ny varotra any amin'ny orinasa vahiny.
Cliquez dans ceiling et metal
Miorena eo amin'ny fatana metaly
Linear Strip Metal Ceiling
Sokao misokatra ho an'ny sela
2017 trano famolavolan'ny vala W300 sarobidy ho an'ny spandrel
Fonosana metaly mihantona
Hazo fanamafisam-peo mihantona amin'ny alim-pitombon'ny elanelana
Fanofanana momba ny varotra 600 * Ceiling metal 600 ho an'ny fanorenana birao
Alain'ny alim-borona vita amin'ny alim-bary vita amin'ny alim-bary ho an'ny orinasa any ivelany
Taona 10 Nanandrana aluminio tsy misy ala mando amin'ny tontolon'ny vala 2 'x 2' miaraka amin'ny SGS
Copyright © Xuzhou Fonnov Architectural Material Co., Ltd.